Uguqula njani iWindows 7's Umbhalo kwiiNtetho zeNtetho
Ukuba usebenzisa iWindows 'yokubhaliweyo okubhaliweyo kwintetho yeNtetho nge-Excel (okanye nayiphi na enye inkqubo), unokuguqula izicwangciso ezimbini ezahlukeneyo: ilizwi olivayo kunye nesantya efunda ngaso. Ungasebenzisa isicatshulwa seWindows ukuya kwiNtetho ukuze ikhompyuter ifunde isicatshulwa kuwe, esiza kakhulu xa ufuna ukuva uthotho lwamaxabiso eseli efundelwa wena njengoko uziqinisekisa ngokubonakalayo kwiphepha elahlukileyo eliprintiweyo.
Ngelishwa, okwangoku, i-Excel kuphela kwesicelo seOfisi esixhasa ngoku lo mbhalo ubalaseleyo kwintetho yeNtetho.
Khetha Qala → Iphaneli yokuLawula → ukuFikelela ngokuFumanekayo → Umbhalo kwiNtetho.
Ibhokisi yencoko yababini beNtetho iyavela.
Cofa isicatshulwa seNtetho ukuya kwiNtetho kwaye ukhethe ukhetho lwakho.
Unokuguqula okubhaliweyo kokubini kuseto lweNtetho:
Ukukhethwa kwelizwi: Ngokuzenzekelayo, ekuphela kwelizwi ledigital elifakwe kwiWindows 7 lilizwi lowasetyhini elibizwa ngokuba nguMicrosoft Anna othetha isiNgesi saseMelika. Nangona kunjalo, unokongeza amanye amazwi edijithali kwaye ukhethe ngokukhetha elinye kuwo kwimenyu ehlayo.
Isantya selizwi: Tsala isilayida kwindawo yesantya selizwi ngasekhohlo ukwenza ilizwi licothe okanye ngasekunene ukukhawulezisa.
Cofa iqhosha lokujonga iLizwi kuqala ukumamela utshintsho lwakho ngaphambi kokucofa u-Kulungile.
Ukuba usebenzisa i-Excel 2007, kufuneka kuqala ukongeza imiyalelo ye-Thetha kwiSixhobo soFikelelo oluKhawulezayo kwi-Excel ngaphambi kokuba usebenzise isicatshulwa seWindows kwiNtetho.
Sebenzisa isicatshulwa kwiNtetho nge-Excel 2003, bonisa okubhaliweyo kwiThuluzi lesixhobo seNtetho (Jonga → Iibar zesixhobo → Umbhalo kwiNtetho).
iinzipho zokuphakamisa ukusuka ebhedini yesikhonkwane emva kwe-acrylic
Ndidinga ukungena kugoogle
kude kube nini ukhula lushiya inkqubo
Ijeli yezilwanyana yokusetyenziswa kwabantu